Izimbadada zinikeza amaholide okuncoma kubasebenzi bokunakekelwa kwezempilo abangama-300 baseCaribbean
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » Izimbadada zinikeza amaholide okuncoma kubasebenzi bokunakekelwa kwezempilo abangama-300 baseCaribbean
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • I-Caribbean • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTurkey neCaicos • Izindaba Ezihlukahlukene
Izimbadada zinikeza amaholide okuncoma
AbakwaSandals Resorts International bamemezele kule nyanga isinqumo sabo sokuhlinzeka abasebenzi bokunakekelwa kwezempilo abangama-300 eziqhingini zaseCaribbean lapho basebenza khona ngokuhlala ubusuku obubili ubusuku obubodwa ezindaweni zabo zokungcebeleka ezihlanganisa wonke umuntu.
Lo kube unyaka onzima kakhulu kuwo wonke umuntu ikakhulukazi amaqhawe asezimpini nabasebenzi bethu bezempilo.
Ngenxa yesibindi nokuzidela kwabo, amaSandals Resorts avuza abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo ngamaholide amahhala.
Ukuqala ngabasebenzi baseJamaica bazophinde bathole amaholide amahle e-Antigua, Barbados, The Bahamas, Grenada, Saint Lucia, nase The Turks and Caicos Islands.
USihlalo Omkhulu Wezimbadada, u-Adam Stewart, uthe lesi senzo sihlonipha imizamo yokuzidela yabasebenzi bezempilo bendawo esifundeni sonke, abaqhubeka nokukhombisa isibindi esincomekayo nokuzidela okukhulu ebusweni balokho osekuyimpi ethathe unyaka wonke.
"Abasebenzi bethu bezempilo babe ngamaqhawe ethu kulo lonke lolu bhubhane," kusho uStewart. “Lo kube unyaka onzima kakhulu kuwo wonke umuntu kodwa amaqhawe ethu asemgqeni wezempi nabasebenzi bethu bezempilo ikakhulukazi bakhombisile izinga lokubekezela nokuzinikela okuthusayo. Le yindlela yethu yokuthi siyabonga futhi sikhombisa ukubonga kwethu ngalokho esikwaziyo ukuthi kube yisikhathi esinzima kakhulu. La maholide afanelekile futhi asikwazi ukulinda ukukhipha ukhaphethi obomvu bese sitotosa amaqhawe ethu ezindaweni zethu zokungcebeleka ezibandakanya. ”
Inkampani yezokungcebeleka izosebenzisana kakhulu noNgqongqoshe Wezempilo eziqhingini eziyisikhombisa lapho isebenza khona ukukhomba abahlomuli besenzo sakamuva, ukuqala eJamaica lapho inkampani isebenza noMnyango Wezempilo Wezabasebenzi Yezinhlelo Zezenhlalakahle ukunikezela ngemisebenzi eminingi yesiqhingi abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo abaneholide elifanele kakhulu.
Abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo e-Antigua, Barbados, The Bahamas, Grenada, Saint Lucia nase The Turks and Caicos Islands nabo kulindeleke ukuthi bathole amaholide okuncoma.
Kusukela kwaqala inkinga ye-COVID-19, iSandals Group ibilokhu ixhasa impi, isekela ohulumeni bezifunda emizamweni yabo yokulwa nalesi sifo nokwabelana ngomqulu wayo oqinile wePlatinum Protocol of Cleanness nezinhlangano zezokuvakasha nezokuvakasha nezinye izindawo zokungcebeleka ukusiza ukuvulwa kabusha okuphephile komkhakha wezokuvakasha esifundeni wonkana.
Ekhuluma ngemizamo yenkampani engaguquguquki, uStewart uthe, “Le mpi ayenzelwa uHulumeni kuphela. Le yimpi yawo wonke umuntu. Izinkampani ezizimele kumele zibambisane nezimboni zikahulumeni ukuze sikwazi ukulwa nalesi sifo ndawonye. Sonke sithintekile yilolu bhubhane futhi siyaqhubeka nokuthinteka ngemuva konyaka. Le yinselelo yawo wonke umuntu futhi ukuthola izixazululo kufanele kube ngumsebenzi wawo wonke umuntu. AbakwaSandals Resorts International basazibophezele ekudlaleni indima yethu futhi kuyasijabulisa ukukwazi ukunikeza lo mnikelo wakamuva kubasebenzi bethu abafanelekile bokunakekelwa kwezempilo. ”
Ukuze ufunde kabanzi ngeSandals Resorts International, vakashela: https://www.sandals.com/about/
AmaJalimane athi auf Wiedersehen ukwanga nokuxhawula...
Indiza ye-EgyptAir ibuyela eCairo ngemuva kokusabisa ...
Umuthi wokugomela iSputnik V waseRussia usuvunyiwe ukuthi ungene kwa-Israel